Tora zvakare Oversize 2GB PST Faira.
musha Products DataNumen Outlook Repair Tora zvakare Oversize 2GB PST Faira
DataNumen Outlook Repair - Dzoreredza Oversize 2GB PST Faira
kushandisa DataNumen Outlook Repair kudzoreredza yako yakawandisa 2GB PST faira, na:
Shandura iyo ive itsva Outlook 2003 fomati.
Iparadzanise mumafaira akati wandei
Microsoft Outlook 2002 uye yepasi shanduro dzinogumira saizi yePST faira kusvika 2GB. Chero nguva iyo PST saizi faira painosvika kana kupfuura iwo muganho, iwe haugone kuhuwana, kana iwe haugone kuwedzera chero dhata nyowani kwairi. Izvi zvinonzi yakanyanya kuwanda PST faira dambudziko.
Microsoft haina nzira inogutsa yekugadzirisa dambudziko. Mhinduro yakanakisa chigadzirwa chedu DataNumen Outlook Repair, iyo inogona kudzoreredza yakawandisa PST faira nyore uye zvine mutsindo. Kuti uite izvi, pane dzimwe nzira mbiri:
Kana iwe uine Outlook 2003 kana yepamusoro vhezheni yakaiswa, unogona chinja iyo yakawandisa PST faira mune iyo nyowani Outlook 2003 fomati, iyo isina 2GB saizi muganho. Iyi ndiyo nzira inosarudzika.
Kana iwe usina Outlook 2003 kana yepamusoro shanduro, unogona kupatsanura rakakura faira rePST kuva mafaera akati wandei. Faira rega rega rine chikamu chedata mune yekutanga PST faira, asi iri pasi pe2GB kuitira kuti iwe ugone kuiwana neAptlook 2002 kana yakaderera vhezheni pasina matambudziko. Iyi nzira isinganetsi sezvo iwe uchida kubata akawanda maPST mafaera mushure mekuparadzaniswa maitiro.
Ruzivo rwakadzama nezve yakanyanya kuwanda PST faira dambudziko.
Tora zvakare Oversize 2GB PST Faira